Feature Yekuvandudza Chirongwa Chakaburitsirwa Qt 6 Kuburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Chirongwa chekuvandudza chirongwa cheQt 6 kuburitswa kwakaburitswa
Lars Knoll, KHTML Injini Musiki, Qt Project Project Manager uye technical director weQt Companuye, akataura nezvehurongwa hwekugadzira rinotevera rakakosha bazi reiyo Qt chimiro. Mushure mokunge Qt 5.14 yebazi mashandiro ekugadzirwa kwapera, budiriro ichatarisa kugadzirira kwekuburitswa kweQt 6, inotarisirwa mukupera kwa2020.
Qt 6 inozoshanduka kuitira kuti ive nechokwadi chekuenderana neQt 5, asi hazviratidzwe kuti matambudziko emunhu anogona kumuka, sezvo marongero ekugadzirisa ekugadzira uye kuchenesa hazvingagone pasina kurasikirwa neimwe nhanho yekuenderana. Kurerutsa shanduko, zvimwe Qt 6 maficha akarongwa kuverengerwa muchidimbu fomu muQt 5.14 uye Qt 5.15 shanduro LTS. Chishandiso chichave chakagadzirirwa zvakare kufambisa kutamira kune Qt 6.
Pakati pezvinangwa zvepamusoro zvebazi rakakura rinotevera kuenzanisa mashandiro nezvinodiwa zve2020, kuchenesa kodhi yekodhi, uye kurerutsa kuchengetedza kweprojekti.
1 Idzi ndidzo shanduko dzinotarisirwa
1.1 Kubatana kwematurusi ekugadzira mushandisi interface
Idzi ndidzo shanduko dzinotarisirwa
Pakati pekuchinja kukuru kwakarongerwa Qt 6 ndiko kugona kuunganidza QML mumiriri weC ++ uye kodhi yemuchina.
Izvo zvakarongerwa kuwedzera nyowani isingabvumirwe dura, Kupa Hardware Interface (RHI), kuona kushandiswa kwakatsetseka kweakasiyana graphical APIs, kusanganisira OpenGL, Vulkan, Metal, uye Direct 3D (yaimbova Qt yaisungirwa kuOpenGL chete).
Zvese zviripo zvekupa zvivakwa, kusanganisira QPainter, Qt Quick Scenegraph, uye Qt3D, zvinoshandurwa kuita RHI. Izvo zvakare zvakarongwa kuwedzera iyo Qt Shader Zvishandiso module kuti utsigire dzakasiyana shader budiriro mitauro uye nekupa kuyambuka-kuunganidzwa kwemumvuri zvese padanho remusangano uye panguva yekuitwa kwechirongwa.
Kubatana kwematurusi ekugadzira mushandisi interface
Kuti udzivise kudzokorora kwekushanda uye kurega kupa zvigadzirwa zviviri zvakasiyana, Qt 3D Studio mashandiro anotarisirwa kuve akabatanidzwa muQt Dhizaini Studio, mazhinji acho iwo masisitimu uye masystem ekubatanidza plugin akavakirwa pane imwechete kodhi base neQt Musiki.
Qt Dhizaini Studio zvakare inoronga kupa yemhando yekubatanidzwa nemapuratifomu ekugadzira zvemukati senge Photoshop, Sketch, Illustrator, Maya, uye 3D Max. Mitauro mikuru inotsigirwa muUbatanidzwa Wekuvandudza Toolkit ndeye C ++, QML, uye Python.
Inotarisirwa kugadzirira yakabatana API kugadzira mushandisi nzvimbo iyo inosanganisa 2D uye 3D mifananidzo yezvinhu. Iyo itsva API inobvumira QML kushandiswa kutsanangura 3D interface zvinhu pasina kushandisa iyo UIP fomati.
Mune iyo nyowani nyowani yekubatanidza 3D zvemukati neQt Inokurumidza, vanoronga kugadzirisa matambudziko senge pamusoro pavanobatanidza QML nezvirimo kubva kuQt 3D kana 3D Studio, uye kutadza kuyananisa kweumwe munhu furemu-nhanho shanduko uye maficha pakati pe2D ne3D.
Joint 2D uye 3D kududzira kunozoitwa uchishandisa iyo nyowani yekupa injini. Yekutanga kuitiswa kweiyo nyowani Qt Kurumidza iine 3D rutsigiro inotarisirwa muQt 5.14.
Wedzera maturusi ekugadzirisa zviwanikwa zvine chekuita nemifananidzo padanho rekuunganidza, semuenzaniso, kushandura PNG mifananidzo kuita yakamanikidzwa machira kana kushandura shading uye meshes kuita mabhainari mafomati akagadzirirwa mamwe makomputa.
Kubatanidzwa zvakare kunoreva kugona kuwana Qt Musiki kuyanana nemadhizaini ekugadzira uye nekupa vanogadzira masisitimu nemikana yekuvandudza maturu.
Pakati pedzimwe shanduko dzakakurumbira ndeidzi:
Shanduro yekuramba muQML uye kubatanidzwa kwezvivakwa zvemadhata zvakadzokororwa muQObject neQML (zvinoderedza ndangariro kushandiswa uye nekumhanyisa kutanga).
Dzivisa kugadzirwa kwemadhata edhisheni panguva yekumhanya uchifarira chizvarwa panguva yekubatanidza.
Viga zvemukati zvemukati nekushandisa zvakavanzika zvivakwa uye nzira.
Yakagadziridzwa kusangana pamwe neyekuvandudza maturusi Refactor uye kuongorora zvikanganiso panguva yekusangana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chirongwa chekuvandudza chirongwa cheQt 6 kuburitswa kwakaburitswa
QT yaizofanira kushandisa huremu hwayo kumanikidza yakadonha imwechete ruzha system yeLinux desktops inomhanya QT. Sezvinoitwa neGoogle paApple, zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kushandisa iyo Android odhiyo zvigadzirwa.
Uye tinotarisira kuti iyi vhezheni inounza zvinoyevedza maficha uye nekuwedzera kurerukirwa kwekuvandudza uye kusabatana. Tinoda QT kusunungura GTK kamwe uye kune ese akakosha mapurojekiti kuenda kuQT. GTK haisi yekumashure chete neyakare (dai yaizobata QT pangadai pasina dambudziko nekutsakatika kweQT) asi kuvepo kwemapuratifomu ese chimwe chezvikonzero zvekukanganiswa, kupatsanurwa uye kudzokororwa kwekuedza kwekuvandudza uye zviwanikwa muGNU / Linux ecosystem.
hmtimer, diki application ine mushandisi interface kudzima pc yako